Xildhibaan Cabdalle Xusseen oo wajigabax kala tegay xaflad… - Latest News Updates
Xildhibaan Cabdalle Xusseen oo wajigabax kala tegay xaflad…
Xildhibaan Cabdalle Xusseen oo wajigabax kala tegay xaflad soo dhoweyn loogu sameynayay Gudoomiyaha cusub ee Degamada Marka.
Waxaa maanta magaaladda muqdisho lagu qabtay xaflad taageero loogu muujinaayay gudoomiyaha dhowaan loo magacaabay degmada Marka ee Goboloka Shabeelaha Hoose Gudoomiye Cabdullahi Axmed (Waafow).
Waxaa xaflada kasoo qeyb-galay siyaasiyiin, Waxgarad, aqooyahanno, dhalinyaro, haween iyo culumaaudiin kuwaasoo kasoo jeeda Gobolka Shabeelaha Hoose, si ay taageero iyo soo dhoweynba ugu muujiyaan Gudoomiye Cabdullahi Axmed (Waafow).
Xildhibaan Cabdalle Xusseen Cali, wuxuu ka mid ahaa martida kasoo qeyb-gashay xafladda, hase ahaatee uu hoolka xaflada isaga huleelay iyadoo lagu gudi jiro xaflada, asaga oo ay wejigiisu ka muuqato caro aad u weyn.
Warar sugan oo laga helay goob-joogayaal ka qeyb-galay xaflada ayaa waxa ay sheegeen, in uu Xildhibaanku ka codsaday gudiga qabanqaabada xaflada in ay liiska nabadoonada qudbadaha ka jeedinaya ku daraan Maxamed Xassan (Garameelo) oo ah Nabaddoon been-abuur ah oo uu asaga soo dhoo-dhoobtay si uu aqoonsi u helo.
Gudiga qabanqaabada xaflada ayaa si adag u diiday codsiga xildhibaanka ayagoo u sheegay in ay u aqoonsanyihiin inuu Xaaji Ibraahim Maxamed Baroow yahay Nabadoonka Beesha Dabruube, uuna 25 kii sano ee lasoo dhaafay ka shaqeynayay nabada iyo horumarinta gobolka.
Xildhibaan Cabdalle Xusseen ayaa waxuu marlabaad isku dayay in nabad-doonka uu soo dhoodhoobay qudbad ka jeediyo asagoo la hadlay Gudooyimada degmada Marka Cabdullahi (Waafow), kasoo xaflada loo qabtay taageeradiisa iyo soo dhoweyntiisa.
Gudoomiye Cabdullahi (Waafow) ayaa isgana sidoo kale ka horyimid icodsiga xildhibaanka, diidayna n nabad-doonka been abuurka ah uu ka mid noqodo nabdoonada kale ee xaflada qudbado ka jeedinaya.
Xildhibaan Cabdalle ayaa wajigabax iyo fadeexada kala kulmay xaflada, wuxuuna isaga baxay goobtii xafladu ka socotay, iyadoo caro aad u weyn laga dareemayo wajigiisa, iyadoo lagu gudi jiro xaflada.
Waxay arintani layaab ku noqotay dhamaan dadkii kasoo qeyb-galay xaflada iyadoo leysweydiinayay waxa ku qasbay in xildhibaanku dhameysan waayo xaflad aad u muhiim ah.